Scuf Impact, onye njikwa na ndị egwuregwu niile chọrọ | Akụkọ akụrụngwa
Scuf Impact, ihe njikwa nke ndị egwuregwu niile chọrọ
Eluigwe "gamer" na-achọwanye, ndị ọrụ ọdịnala na-abanye n'ikike nke ịsọ mpi "ndị ọkachamara" na asọmpi, nke ahụ bụ ihe dị mma banyere egwuregwu, na nka na njikwa / PC ị nwere ike nwee nnukwu ọganiihu na ịga n'ihu na nyiwe dị ka Twitch na YouTube.
Enyemaka ọ bụla dị obere n'oge a, yabụ usoro ngwaahịa amalitela iji nyere ndị na-ege ntị aka inweta nsonaazụ kacha mma site na egwuregwu ha.
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị ejiri vidiyo, Anyị makwaara na dịka iwu n'ozuzu ọ kachasị mma ka ọ hụ otu esi arụ ọrụ na vidiyo karịa ịgụ ya, ọ bụ na ị naghị eche? Anyị na-akpọ gị òkù ka ị gaa na ọwa YouTube anyị ma si otu a ị na-enyere ndị obodo aka ịga n'ihu na-enyocha ngwaahịa ndị kachasị amasị n'ahịa, naanị mgbe ahụ ka anyị ga-ewetara gị ngwaọrụ elektrọnik ndị ahụ masịrị gị ma mee ka ndụ gị dịkwuo mfe. ihe anyi choro na nyocha anyi bu nkenke na inwere ike ikpebiri onwe gi ma oburu na ahia gi bara uru.
1 Design na ihe: Ofụri Esịt ahaziri
2 N'azụ paddles maka kacha akara na configurable
3 Customizable dijitalụ triggers
4 Na-enwe ọ joụ ọystụ
Design na ihe: Ofụri Esịt ahaziri
A na-ahazi ihe nchịkwa Scuf a sitere na Sucfgaming ruo n'ókè ike ọgwụgwụ, na ibe ya (njikọ) nke bụ ebe ị ga-enwe ike ịzụta ya, ị nwere ike ịhọrọ site na agba gaa n'ihe oyiyi e biri ebi. Ọbụghị naanị nke ahụ, kamakwa ngalaba ndị ọzọ dịka ogologo nke ihe na-akpata ma ọ bụ ụdị ọystụ ị ga-ahọrọ. Ọnụahịa ha na-amalite site na euro 115 n'agbanyeghị na ego a ga-abawanye dabere na njirimara ndị ị gụnyere ma ọ bụ hazie, dị ka ezi uche. Dị ka anyị nwere ike iche n'echiche, ọ na-akwado ọrụ niile nke DualShock nkịtị.
Na nha ọ dị ntakịrị karịa (na ergonomic) karịa PS4 DualShock 4 ọdịnala. Anyị were ohere icheta na a pụkwara ịzụta iwu a na ụdị ya maka Xbox One Ndị a bụ atụmatụ ndị kachasị mkpa m nwere ike ịza ajụjụ na ọkwa ọkwa ahụ:
Akpalite na-agbanwe agbanwe n'ogologo na nke a na-agbanwe agbanwe na usoro nke njem
Ihe na-edozi rubberized na azụ nke na-enye ohere ka mma na nkenke
Ọ -ụ na-enweghị amị amị nke na-ekwe ka nkenke ka ukwuu, nke a na-ete mmanụ nke ọma yana nke nwere usoro na-aga were were
N ezumike na ọdụ ụgbọ mmiri na-echekwa eriri ma gbochie nkwụsị
N'azụ paddles maka kacha akara na configurable
Mkpịsị ụkwụ azụ bụ ụdị bọtịnụ agbakwunyere ga-eme ka anyị nwee ike iji azụ nke ime ime ihe wee si otú a nye ọrụ dị ka ịwụ elu ma ọ bụ ihulata, ya mere, anyị nwere ike ịzaghachi ịgba égbè ọsọ ọsọ karịa na-enweghị mkpa ịkwụsị ịpị bọtịnụ pịa, nke a bụ uru nke nwere ike ime mgbanwe na egwuregwu, dịka ọmụmaatụ, nke Fortnite ebe obere ọkụ nwere ike ime ka anyị merie ma ọ bụ tufuo egwuregwu. Typedị arụmọrụ a na-ewu ewu n'etiti ndị egwuregwu egwuregwu, n'eziokwu, ole na ole anaghị eji ihe njikwa arụ ọrụ a.
Anyị nwere paddles anọ na azụ nke dabara na bọtịnụ ahụ (gburugburu, square, triangle na X), na mgbakwunye enwere ike wepu pallets a ma ọ bụrụ na anyị ejighi ihe niile na anyị chọrọ iji zere keystrokes n'amaghị ama. A na-ahazi ha na ndabara dịka ntuziaka ndị ahụ si dị, agbanyeghị, anyị nwere magnet gụnyere na igbe nke ga-enyere anyị aka ịhapụ paddles azụ iji kwupụta ụdị omume ndị ọzọ na-eitatingomi bọtịnụ ndị ọzọ na ime, n'ihi na nke a soro ntuziaka na-abịa na ngwugwu. Onwe ya, ọ bụ arụmọrụ m na-ejighi, ebe ọ bụ na ndabara nhazi ahụ jeere m ozi.
Customizable dijitalụ triggers
Anyị nwere ọtụtụ ohere ịhazi ya na ndị na-ebute ya, nke a dị mkpa n'ihi na n'agbanyeghị na ndị na-ebute ọdịnala nwere ọrụ dị iche iche na-adabere na nrụgide a na-arụ, eziokwu a nwere ike ịbụ ọghọm mgbe anyị jiri obere mkpịsị aka gbaa. nwere ike ịmepụta njedebe na-enweghị isi, n'ihi na ihe anyị chọrọ n'enweghị obi abụọ ọ bụla bụ na a na-eme ogbugba ahụ ozugbo emechara akwụkwọ akụkọ ahụ, dị ka a ga - asị na ọ bụ bọtịnụ, ndị a bụ usoro nhazi nke Mmetụta Scuf a:
Igkpalite wheel njem: Dabere na ọnọdụ anyị na-ekenye na wiil anyị ga-enwe ụzọ ka ukwuu ma ọ bụ nke pere mpe, ọ bụrụ na anyị ekenye obere ụzọ anyị ga-eme ngwa ngwa pulsations, dịka ọmụmaatụ mgbe anyị na-eji ngwa ọgụ gbawara agba, uru pụtara ama.
Mgbatị: Mmetụta Sucf gụnyere ụdị nke abụọ na-eweta na ngwugwu ahụ, ụfọdụ dị ntakịrị karịa nke nke iwu ọdịnala yana ọkachasị ogologo nke na-enyekwa anyị ohere ịme ogbugba ahụ na obere mbọ.
Ma nke elu ma nke ala bụ nke dijitalụ, na-ebelata njedebe, na mgbakwunye, ihe nrịgo elu nwere mmetụta dị mkpụmkpụ ma dị irè, ọ bụ ezie na na omume, ọ bụ kpọmkwem na arụmọrụ a ka m nwee ike ịchọta obere ọdịiche, ihe butere ya yiri ka ọ dị m mkpa.
Na-enwe ọ joụ ọystụ
Ọystụ bụkwa ihe na-ekpebi ihe, ihe a na-emebu bụ dochie ndị nke DualShock 4 nke na-enweghị aha ọma maka ịdị oke mma, n'eziokwu, ọgbọ mbụ nwere nnukwu nsogbu ịkpa akwa. The Scuf Impact nwere usoro nke ọ interụ na-agbanwe agbanwe dabere na mkpa onye ọrụ: Standardkpụrụ ma ọ bụ concave nwere elu atọ dị iche.
Gbanwe ha dị oke mfe, ọ gụnyere igodo na-enye anyị ohere iwepu mkpuchi ahụ ma dochie ha, dị ka a hụrụ na vidiyo, ọ bụ ikuku. N'ezie o juru m anya etu ọ dị mfe, ọtụtụ ihe atụ karịa sistemu mmegharị na-akpalite.
Anwaleala m Scuf Impact a na PlayStation 4 Pro maka izu ole na ole, ọkachasị igwu Apex Legends, Fortnite, na Crash Team Racing. Ekwesịrị m ịsị na ahụghị m ezi uche na ịkwọ ụgbọ egwuregwu ma ọ bụ ọbụlagodi ihe egwu, onye njikwa a na-eche echiche ị nweta ọtụtụ n'ime ya na FPS dị ka iwu ndị iwu nyere, ebe belụsọ ma ị bụ "onye agha" dị ka m, ị ga-ahụ mmeghachi omume ọsọ ọsọ ma dị mma karị. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụrụ na ị na-eji egwuregwu vidio egwu egwu ma na-etinye ọtụtụ awa na-egwu egwuregwu, gịnị ma ị tinye ego na ngwaọrụ maka ya? Ọ dịghị ka ngwaahịa dị ọnụ ahịa dị elu nye m yana ọ na-enye gị ohere ịmegharị ya ruo oke ike ọgwụgwụ, ịnwere ike ịzụta ya ozugbo na weebụsaịtị ya (njikọ).
Sucf Impact, ihe njikwa nke ndị egwuregwu niile chọrọ
Akụrụngwa na imewe bụ nke a na-emezi
Ọ dịghị arọ karịa nke mbụ na imepụta ya karịa ergonomic
Nkọwapụta dị ka njikọ microUSB na 3,5mm Jack na-ahụ anya
Enwere ike idozi ụfọdụ bọtịnụ ma ọ bụrụ na ị metụ ya nke ukwuu mgbe ịtọ ya
Enweghị ike ịhazigharị azụ azụ ma ọ bụrụ na ịgụghị ntuziaka nke ọma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Scuf Impact, ihe njikwa nke ndị egwuregwu niile chọrọ
United States na-ebuli veto na Huawei, ugbu a gịnị ga-eme?